Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Fialan-tsasatra rehetra amin'ny Sandal: ho an'ny fianakaviana iray manontolo!
Vaovao Mafana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Resorts • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Tiorka sy Kaicos Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Faly ny fianakaviana ao amin'ny Sandals!
Sandals Resorts dia nanjary mitovy dika amin'ny sarin'ny mpivady faly mankafy fialan-tsasatra amam-pitiavana sy tsy misy ahiahy izay hikarakarana tanteraka ny zava-drehetra satria tena misy tokoa izany rehetra izany. Ahoana anefa raha fianakaviana ianao? Tongasoa eto amin'ny Sandals Beaches!
Ny fialan-tsasatry ny Beaches Luxury Included® dia misy zavatra bebe kokoa ho an'ny rehetra.
Eto dia misy ny fanatanjahantena an-tany sy rano eto ambanin'ny masoandro, manomboka amin'ny fisakafoanana gourmet amin'ny fotoana rehetra ka hatramin'ny trano fisakafoanana manokana 21, hatramin'ny hetsika sy kojakoja ilaina amin'ny sokajin-taona rehetra, sy ireo efitrano malalaky ny fianakaviana.
Fotoam-pialan-tsasatra ho an'ny mpianakavy ity miaraka amina fampidirana bebe kokoa, safidy bebe kokoa ary fomba maro kokoa hankafizana fotoana iarahana.
Mitondra akaiky kokoa ny olon-drehetra - Mpivady, fianakaviana, namana akaiky indrindra, vondrona ary fampakaram-bady
Fialan-tsasatra tonga lafatra no miandry ao amin'ny trano fandraisam-bahiny misy an'i Beaches ao Turks & Caicos sy Jamaica. Milalaova eny amoron-dranomasina madio sy madio izay sambo-dranomasina madio mangarahara. Mandany fialan-tsasatra ho an'ny mpianakavy ao amin'ny efitrano sy efitrano fandroana mihaja. Ankafizo isan-karazany ny hetsika mampientam-po sy mahafinaritra ho an'ny ankizy amin'ny taona rehetra. Ny toeram-pialan-tsasatra rehetra ao amin'ny morontsiraka dia misy valan-javaboary ao amin'ny Pirates Island, tarehin-tsarimihetsika Sesame street®, tobin'ny ankizy ary toeram-pandihizana mahafaly ho an'ny tanora. Marina tokoa, ny toeram-pialan-tsasatra amoron-dranomasina any Jamaika sy Turks & Caicos dia mampanantena fonosana fialan-tsasatra tsy hay hadinoina eto ambanin'ny masoandro Karaiba. Manomana mariazy? Beaches Resorts dia manolotra fampakaram-bady mahavariana sy fonosana tantely.
Aza raisina ny teninay
Ny loharanom-baovao tsara indrindra dia ao famerenana mpitsidika. Vakio izay nolazain'ireto vahiny ireto vao iray volana lasa izay tao amin'ny TripAdvisor momba ny fialan-tsasatra nataony tao amin'ny hotely Beaches.
Tiorka sy Caicos amoron-dranomasina any Providenciales
Fialan-tsasatra any Karaiba amin'ny trano mihaja iray tena nosy - nifidy # 2 Resort Caribbean ho an'ny Fianakaviana araka ny TripAdvisor
L1279DGkathyf: “Nandeha mamy 16! Nahafinaritra! Ireo mpiasan'ny bartenders sy miandry, ny fandraisana - mahatalanjona daholo! Tsara ny trano fisakafoanana! Tashana indrindra fa ny Neptune dia ambony sy mihoatra !!!! Hiverina tokoa! ”
Ranomasina Negril any Jamaika
Any amin'ny morontsiraka 7-Mile malaza any Negril no misy azy - Vote # 1 Caribbean Resort for Families by TripAdvisor
Voyage35019172706: "Manana fijanonana mahatalanjona any amin'ny Beach izahay. Mahafinaritra ny efitranonay. Tiako ilay bitsika ary nahazo namana an-taonina aho. Tena nikarakara anay tany amin'ny bara i Ricardo ary i Adrian tao amin'ny pisinina lehibe. Tena tsara ny sakafo. Tena hiverina eto amin'ity paradisa nosy ity isika. ”
Ranomasina Ocho Rios any Jamaika
Fialan-tsasatra amoron-dranomasina an'ny fianakavian'i Jamaika - Nisafidy Top Resort Caribbean 5 ho an'ny fianakaviana amin'ny alàlan'ny TripAdvisor
kelizabeth_13: “Niavaka ny zava-drehetra. Ny sakafo, fitsangatsanganana, efitrano ary mpiasa !! Raha ny marina dia heveriko fa ny mpiasa dia manatsara ny fotoanao 1000x tsara. Sariaka izy ireo, mandray olona ary amin'ny ankapobeny dia ataovy izay hahazoana antoka fa voakarakara ianao. Mahagaga ny ekipa mpivarotra antsitrika. Glenroy, Oshan, Sherief, Sheldon, Marlon, Ackeem, Triston, & Shan dia nahafinaritra sy nampiantrano anay foana. Glenroy dia nanao izay hisitrahana sy hilamina ary hilamina! Azo antoka fa nisongadina tamin'ny dia nataoko izany. Ny snorkeling ao anaty sambo fitaratra dia tsy maintsy atao koa. Tsy andriko intsony ny hamandrika indray !! 10/10 ity dia ity. ”
Tena tafiditra ao daholo ny zava-drehetra
Ao amin'ny morontsiraka, izay zavatra azo eritreretina rehetra ihany no ampidirina. Tsy mila poketra, atsipazo fotsiny amin'ny rivotra tropikaly ny fiahianao. Ny kapa dia mamaritra ny atao rehetra amin'ny fampidirana azy rehetra:
Toeram-pisakafoanana sy bara
Valan-drano any Pirates Island
Programme ho an'ny ankizy
Fanatanjahantena anaty rano
Golf sy Fanatanjahantena an-tanety
Ranomasina tsara indrindra any Karaiba
Divay divay Robert Mondavi Twin Oaks®
Fanambadiana sy tantely tantely